Jeneraly Ravalomanana, Miresaka ny fifandraisanyamin'ilay mpivarotra andramena Eddy Bois de Rose - AoRaha du 3 mars 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose Jeneraly Ravalomanana, Miresaka ny fifandraisanyamin’ilay mpivarotra andramena Eddy Bois de Rose...
Namaky am-batolampy ny fifandraisany tamin’ny mpandraharaha amin’ny andramena izay naiditra am-ponja eny Tsiafahy, herinandro maromaro lasa izay, ny jeneraly Ravalomanana Richard. Nanararaotra ny andro natokana ho an’ny zandarimaria tetsy Ampefiloha, omaly, ity manamboninahitra jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg) ity, ka niaiky ny fisian’ny fifaneraserany tamin’io mpandraharaha antsoina hoe Eddy Maminirina io. Nambarany fa tsy tamin’ny sehatry ny fandraharahana andramena velively no nifandraisany tamin’ity lehilahy voatazona vonjimaika any am-ponja ity.
Fantatra fa taorian’ny fifanolanana momba ny fiara iray teo amin’itsy farany sy ny manamboninahitra zandary iray, izay voalazany fa manana rohimpihavanana tamin’ny mpikamban’ny governemanta iray tamin’ny vanim-potoanan’ny tetezamita no nanombohan’ny fifankahalalan’izy ireo.
« Lehiben’ny fari-piadidian’ny Zandarimaria Antananarivo aho, tamin’ izany, ary tsy mbola nifankahalala taminy», hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard teny amin’ny tranombokim-pirenena Ampefiloha, omaly. Efa saika niafara tamin’ny fanokafana fanadihadiana sy famotorana io raharaha fifanolanana tamina fiara io no teraka ihany ny fifandaminana teo amin’ilay mpandraharaha sy ilay manamboninahitra zandary, araka ny heno tamin’ny resaka nataon’ny Seg hatrany.
Navoakan’ny jeneraly Ravalomanana Richard, omaly, hatramin’ny fanampiana azony tamin’io mpandraha- raha io nandritra ny raharaha tao amin’ny fianakaviany. Nahazo hatramin’ny fianakaviamben’ny zandary satria nampahafantarin’ny Seg ankehitriny fa “ Nanampy ho an’ny sekoly tany Ambositra izy. Nisy koa ny fanampiana nataony tamin’ireo zandary rava trano tany Nosy-be”.
“ Tsy nisy vola noraisiko an-tanana kosa anefa ireo rehetra ireo fa ny lehiben’ ny sekoly sy ny sosialin’ ny vadin’ny zandary no nasaiko nifandray tamin’ io mpandraharaha io. Momba ny resaka andramena dia mbola kaomandin’ny Zandarimaria teto Antananarivo aho tamin’ izany, ka tsy misy andramena eto », araka ny fanazavana nataon’ity manamboninahitra ambony ity nanoloana an’ireo resabe avy amin’ ny fivoahan’ny vaovao momba ny fifandraisany tamin’i Eddy Maminirina.
Nohazavain’ny jeneraly Ravalomanana Richard hatramin’ny fananany, toy ireo tranony eny Ambohi- manga sy Ambatolampy mihitsy, ary ny fiara ampiasainy. « Fehiny, tsy misy fifandraisana hafa ankoatra ireo notanisaiko ireo teo amiko sy io mpandraharaha io ary azo porofoina avokoa izany », hoy ny Seg namarana ny fanazavany ny zava-nisy.
Hofaizina mafy ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly – Ao Raha 22 fevrier 2019
Corruption sur les marchés publiques, l’ancien premier ministre Olivier Mahafaly auditionné – Expressmada du 2 mars 2019
Raharaha kidnapping tao Toamasina – Mpitsara ambony dimy naato amin’ny asany – Taratra du 28 mars 2019
Article précédentRANDRIANASOLO Jacques – Mamofona kolikoly ny famoahana an’ilay ahiana maka ankeriny – Kolo Tv du 3 avril 2019
Article suivantSuspension des magistrats et détention des responsables du service foncier – Intransigeance du ministre de la Justice – Expressmada du 3 avril 2019
Recrutement de commissaires de police : des candidats demandent l’annulation des...
Madagascar – Compétence et honnêteté bannies par tous les gouvernements successifs...